नुन नखाँदा के हुन्छ ? – Sudarshan Khabar
हाम्रो कतिपय परम्परा एवं संस्कारमा पनि नुनलाई बर्जित गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा नुन सेवन गरिदैन । त्यसो भए के नुन हानिकारक नै हो त ? नुन स्वादका लागि मात्र खाइरहेका छौं ? अहिले हाम्रो भान्सामा जुन नुन चलनचल्तीमा छ, त्यसलाई टेबल साल्ट वा सफा नुन भनिन्छ । यसलाई सोडियम क्लोराइड भनिन्छ, जसमा सोडियम र क्लोरिनको मिश्रण हुन्छ ।